सदा हँसिलो देखिन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस – Etajakhabar
सदा हँसिलो देखिन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस
काठमाडौं- पीर, चिन्ता र तनाव कसलाई हुँदैन । आफ्ना काम, घरपरिवार र समाजका कारण कति तनाव आइलाग्छन् भने कति आफ्नै कारण । खाशमा तनावले पिछै छाड्दैन कसैलाई । यसबिचमा पनि कति मान्छ हाँसिला देखिन्छन् र हँसिलो देखिने मान्छे राम्रा देखिन्छन् । यसका लागि स्वस्थ मन र स्वस्थ शरीर आवश्यक पर्छन् । खुशी हुन र भइरहन गर्नुपर्ने केही कुरा यस्ता छन् ।
– लेख्ने, पढ्ने, चित्र कोर्ने, नाच्ने, गाउने, खेल्ने, सिलाइबुनाइ गर्नेजस्ता सिर्जनात्मक काम गर्नुस् । सिर्जनात्मक काममा लागियो भने शरीरका नकारात्मक ऊर्जा सिर्जनात्मक ऊर्जामा परिवर्तन हुँदै जान्छन् र मन प्रसन्न रहन थाल्छ ।स्वस्थ खबरपत्रिकाले छापेको छ ।
– कुनै उद्देश्य राखेर यसका लागि आफूलाई क्रमशः तयार गर्दै लैजानु राम्रो हो । तर, चाँडै कुनै नतिजा हासिल गर्ने महत्वाकांक्षा राख्नुभयो भने यसले तपाईंलाई तनावमा राख्छ । यसले तपाईंको खुशी समाप्त पारिदिन्छ । त्यसैले बढी महत्वाकांक्षी नबन्नुस् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ०७, २०७३ समय: ९:२४:०२